Debt Recovery - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကြွေးမြီ Recovery ကိုရှေ့နေများ
သငျသညျနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သို့မဟုတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာနဲ့အကြွေးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ဖောက်သည် / client ကိုတစ်ဦးမြီစားဖြစ်လာနှင့်သူ၏ဥပဒေကြမ်းများအခြေချရန်ငြင်းဆန်သောအခြေအနေမျိုးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြတယ်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ် နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကြွေးမြီပြန်လည်နာလန်ထူရှေ့နေတွေ သင့်ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများအခိုင်အမာမှအလျင်အမြန်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံထမြောက်မည်.
Lex Artifex LLP, တစ်ဦးကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်းဥပဒရုံးဘယ်နေရာမှာမဆိုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကြွေးမြီစုဆောင်း. The office is dedicated to providing creditors with the highest quality legal counsel and representation available in order to recover overdue debts.
ကျနော်တို့ကြွေးရှင်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ကြုံတွေ့နေကြသည်, အပါအ, အမိန့်အားသွင်း, ပူးတွဲမှု, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကွပ်မျက်, ဂေါပကရဲ့ရောင်းအား, foreclosures, တရားစီရင်ပိုင်, တရားသဖြင့်စီရင်စုဆောင်းမှု, နိုင်ငံခြားစီရင်တော်မူ၏မွေးမြူ, ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောကိစ္စများတွင်နဲ့ကြွေးရှင်ရဲ့ကိစ္စများ.
ကနေအထိကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပေါ်စျေးနှုန်းများ၏အားသာချက်ကိုယူ 5% – 50% စုဆောင်းမှု၏အမျိုးအစားနှင့်ယင်းအရေးဆိုမှု၏ပမာဏပေါ် မူတည်.. တရားစွဲဆိုခြင်း, ကျွန်တော်တစ်ဦးအားသွင်း 5% non-contingent suit fee to apply against our contingent rates. Flat rates are also available on request.
Lex Artifex LLP ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကောင့်စုဆောင်း, လက္ကားနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်, ဘဏ်များ, ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ, စသည်တို့ကို.
ကျနော်တို့ကစိတ်ကျေနပ်မှုကို client သကဲ့သို့သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းရလဒ်မျိုးမကယ်မလွှတ်ငါတို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ဝတ်ပြုလို့ရပါတယ်အလွန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုးစားကြ.